Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid? - PDF
Download "Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid?"
1 Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid? Xaammilnimada, dhalmada iyo muddada ummusha ee noorwey Waxaa diyaariyey ummuliso Synne Holan IS-1396 somali
2 Gogoldhig Haweenka si isku mid ah ayay uur u qaadaan, u dhallaan, u naas nuujiyaad una daryeelaan carruurtooda gebi ahaan aduunka oo idil, balse bulshooyinka waxay u abaabulaan barnaamijyadooda daryeelka caafimaad ee loogu tala galay haweenka uurka leh si kala duwan. Taasi waa sababta aan u soo diiyaarinay buug-yare xogeedkan si aan idinku sheegno sida aan waxyaabaha ugu sameyno Noorwey. Halkan waxaad ka helaysaa xog ku saabsan: Goobta laga helo caawimaad marka aad uurka leedahay iyo marka aad ilmo dhali rabtid Waxa ku dhacayo jirkaaga iyo cunugaaga xilliga xaammilnimada, muddada dhallmada iyo dhalmada kadib Xuquuqda aad leedahay marka aad tahay uurka leedahay, marka aad ilmo dhallaysid iyo xilliga lagu guda jiro muddada ummusha Waxa ka dhacaya goobta baaritaanka xaammilnimada iyo isbitaalka Uur la haanshaha waa mid xiiso iyo caraynba leh. Lagayaabee in aad u baahan tahay xog ka badan tan aad ka helaysid buug-yarahan. Haddii aad su aal qabtid waxaad waydiin kartaa ummulisooyinka, takhtarada iyo shaqaalaha bukaan socod eegatada caafimaadka dadweynaha. Waxaad sidoo kale waydiin kartaa saaxiibada ilmo ku dhalay gudaha Noorwey. Waxaa jira buugaag badan oo ku saabsan xaammilnimada, dhalmada iyo muddada ummusha. Buugaagtaan badankood waxay ku qoran yihiin Af Noorwejiyan ama Af Ingiriisi waxaana laga helaa dukaanada buugaagta lagu iibiyo iyo maktabadyada dadweynaha. Haddii aad isticmaashid bar internet, waxaad helaysaa boggag internet ee bixiya xog waxtar leh. Dadka kuu dhow waydii sida loo helo boggag internet oo ku qoran luuqadda aad doorbidaysid. Ereyada iyo oraahyada Af Noorwejiyanka ah Inta aad xaammilada tahay, marka ay dhalmadaada soo dhowaato iyo xilliga lagu guda jiro muddada ummushaada waxaad maqlaysaa ereyo laga yaabo in aadan baranin markii aad dhiganaysay koorsada luuqadda Af Noorwejiyanka. Way kuu fududaanaysaa in aad fahantid waxa socda haddii aad tahay qof aqoon u-leh ereyadan Af Noorwejiyan ahaan. Buug-yarahan sidaas-darteed wuxuu ku siinayaa saddex liis oo ereyo ah waxaa laga yaabaa in aad u aragtid kuwo wax-tar leh. 2
3 Qaybta 1 Ereyada xaammilnimada Gravid Graviditet/svangerskap Svangerskapskontroll Ultralydundersøkelse Genetisk veiledning Jordmor Lege Gynekolog Helsestasjon Henvisning Termin Foster Blodprøver Urinprøve Blodtrykk Vekt Blodprosent/hemoglobin Blodsukker Svangerskapsdiabetes Pre-eklampsi/ svangerskapsforgiftning Bekken Vagina/skjede Livmor/uterus Mormunn/cervix Omskåret Abort Prematur fødsel Overtidig fødsel Dødfødsel Xaammilo Xaammilnimo Baaritaan Xaammilnimo Baaritaanka muujiyaha muuqa-hoose ee uurka La talin la xiriirta hidda-wadayaasha Ummuliso Takhtar Takhtarka cudurada haweenka iyo daaweyntooda Bukaan socod eegatada caafimaadka dadweynaha U dirid Taariikhda la filayo in ilmaha uu dhasho Uur kujirka Sanballo dhiig ah Kaambi-yoone (tusaale) kaadi ah Cadaasidka dhiigga Culays Heerka unugyada cas ee dhiigga ama boqolkiiba unugyada dhiigga cas Sonkorta dhiigga Sonkorowga uurka Dhiig karka uurku keeno (Preeclampsia) Lafa-misigga Unuga dhalmada iyo galmada ee dheddiga Ilma-galeenka Afka Ilmo galeenka Gudiniin/Gudniinka fircooniga Ilma la soo xaaqo/ilma dhicis ah dhallid Dhalmada aan waqtigeeda la gaarin Dhalmo waqtigii la filayay ka dib dhacdo Ilmo asagoo meyd ah dhashay 3
4 Xaammilnimo Uurka? Haddii aadan hubin haddii aad uur leedahay iyo haddii kale, waxaad qaadan kartaa baaritaanka Af Noorweejiyan ahaan loo yaqaano baaritaanka-gravi. Waxaan tani ka soo iibsan kartaa farmashiyaha waxaadna baaritaanka ku sameyn kartaa guriga. Waxaad sidoo kale arki kartaa Takhtarkaaga Guud ee joogtada ah ama ummulisadaada wixii ku saabsan caawimaada sameynta baaritankan. Ma u baahan tahay turjumaan? Waxaad xaq u leedahay turjumaan haddii aadan ku hadlaynin Af Noorwejiyan, ama haddii aadan hubin in aad fahmaysid wax kasta oo lagugu yiraahdo. Dhammaan turjumaanada waxaa saaran waajibaad sir qarin ah. Tani waxaa loola jeedaa in aysan cidna u sheegi karin wax ku saabsan waxa la yiri marka ay kuu turjumayeen. Waxaad sidoo kale waydiisan kartaa turjumaanid taleefoonka ah. Haddii aad u baahan tahay turjumaan, waa in aan ku soo wargelisaa takhtarka ama ummulisada ka hor waqtiga ballantaada. Waxaa laga yaabaa in ay qaadato maalmo si laguugu diyaariyo turjumaan. Turjumaanka waa lacag la aan. Baaritaanka Xaammilnimada Marka aad uur leedahay, si qayb ahaaneed hab-raaca daryeelka dhalmada ka hor ee Noorwey gudaheeda ah, waxaa lagu siinayaa ballan loogu tala galay baaritaanada caafimaadka xaammilnimada ee joogtada ah, oo loo yaqaano svangerskapskontroll. Adiga go aan ka gaar haddii aad doonaysid in aad la kulantid ummuliso, takhtar ama aad aadaysid bukaan socod eegtada caafimaadka da weynaha. Takhtarada iyo ummulisooyinka waxaa loo soo tababaray in ay fuliyaan baaritaanadan. Ninkaaga, jaalkaaga ama qof kale ayaa ku soo raaci kara. Haddii ay dhibaatooyin yimaadaan inta lagu guda jiro xaammilnimadaada, takhtarka ama ummulisada waxay ballan kuugu diyaarinayaan qof takhasus u leh. Waxaa jira faa iidooyin badan ee aaditaanka baaritaanada xaammilnimada. Caafimaadkaaga iyo tan cunugaaga waa la baarayaa, waxaadna helaysaa xog wax-tar leh iyo caawimaad. Baaritaanada xaammilnimada waa lacag la aan. Imaaw Waqtiga laguu qabtey Marka la joogo Noorwey baaritaanada xaammilnimada waqti ayaa loo qabtaa sidaas awgeed waa in aan imaataa waqtiga laguu qabtey ballantaada takhtarka ama ummulisada. Waa in aad ku soo wargelisaa xafiiska si deg-deg ah haddii aadan imaan Karin ama haddii laguu daahiyay si aan laga fursan Karin. Haddii aadan dad ku soo wargelinin, ballantaada takhtarka ama ummulisada waa la nasakhayaa waana in aad sameysatid ballan cusub. Baaritaano iyo Tijaabooyin Sanbadalada dhiigga iyo Kaambi-yoone (tusaale) kaadi ah waxaa sida caadiga ah la qaadaa xilliga baaritaanka xaammilnimada. Baaritaanadan waxay bixiyaan xog muhiim ah oo ku saabsan caafimaadkaaga iyo sidoo kale mararka qaarkood mid ku saabsan caafimaadka cunugaaga. Waxaa lagaa qaadayaa baarista muujiyaha muuqa-hoose ee uurka (ultrasoundka) ku dhowaad toddobaadka 18 ee xaammilnimadaada. Dhammaan tijaabooyinka iyo baaritaanada waa si iskaa-ah. Waxaad xaq u leedahay in aad diidid waxa uu takhtarka ama ummulisada ay ku talinayaan, balse ma dalban kartid in aad qaadatid baaritaano kale ama kuwo ka duwan oo aan qayb ka ahayn hab-raacyada caadiga ah. La talinta la xiriirta hidda-wadayaasha sidoo kale waa la heli karaa, sababtoo ah baaritaanada waqtiga hore ah ee muujiyaha muuqa-hoose ee uurka (ultrasoundka) ee loogu tala galay haweenka halis ayay leeyihiin. Waxaad ka helaysaa xog badan oo ku saabsan baaritaanada iyo tijaabooyinka ummulisadaada ama takhtarkaaga jooga goobta baaritaanka. 4
5 Ma lagu soo guday? Haddii lagugu soo guday gudniinka fircooniga/gudniin caagi ah, waa in aad tani ku sheegtaa baaritaankaaga xaammilnimada. Gudniinka waxaa la furi karaa in badan ka hor inta aadan dhallin. Takhaatiir khibrad u leh ayaa tani ku sameeya isbitaalka waxaana lagu siinayaa daawo qofka lagu suuxiyo si ay kuugu kabaabiso hab-raaca. Xog wax-tar leh Buug-yaraha loogu magic daray Er du gravid? Informasjon om svangerskapsomsorgen (Uur miyaad leedahay? Xog ku saabsan baaritaanada xaammilnimada) wuxuu ku siinayaa xog badan oo ku saabsan waxa ka dhaca goobta baaritaanada xaammilnimada. Buug-yarahani oo Af Noorwejiyan iyo Af Ingiriisiga ah waxaa laga heli karaa takhtarkaaga ama ummulisadaada. Faa iidooyinka damaannada bulshada Waxaad xaq u leedahay faa iidooyinka hooyonimada haddii aad ka shaqaynaysay shaqo lacag ah Noorwey gudaheeda ee banaanka gurigaaga ah ku dhowaad lix bilood oo ka mid ah 10kii bilood ee ugu danbeeyay ka hor inta aadan ilmo dhallin. Haddii aad xanuunsatid inta aad xaammilada tahay, waa in aad la xiriirto takhtar. Haddii aadan aboodin in aad sii shaqaysid sababo la xiriira in laga yaabo in ay waxyeello soo gaaraan adiga iyo cunugaaga, waxaad xaq u leedahay in laguu xil saaro hawlo kale ee shaqo ama in aad qaadatid faa iidooyinka xaammilnimada. Haddii aad tahay arday ama aadan shaqo ku haysan banaanka gurigaaga, waxaad xaq u leedahay faa iido dhaqaale kadib marka aad ilmo dhashid. Caddadkan dhaqaalaha waxaa loo hagaajiyaa si sannadle ah. Haddii aad tahay magan-galyo doon, waxaad leedahay xaquuqda caymiska qaranka oo xaddidan. Xaq uma lihid faa iidooyinka hooyonimada ama gunno cunug. Kala hadal ummulisadaada ama takhtarkaaga wixii ku saabsan xaaladaada, ama la xiriir NAV (wakiilka damaannada bulshada) haddii aad qabtid wax su aalo ah. Diiwaan-gelintaada shakhsi ahaaneed ee hooyonimada Diiwaan-gelintaada shakhsi ahaaneed ee hooyonimada ( helsekortet ) waa dukumeentiga ay ummulisada ama takhtarka ay ku qorayaan xogta ku saabsan caafimaadkaaga. Waa in aad mar walbo wadatid diiwaan-gelintaada shakhsi ahaaneed ee hooyonimadaada oo ku jira faylka waraaqaha la gashado ee caaga ka sameysan. Ummulinta Ummulisada ama takhtarkaaga waxay kuu diyaarinayaan in aad ku dhashid isbitaal ama qol ummulis. Haddii aad dareentid in ikhtiyaarkooda uusan ku qancinaynin, waxaad xaq u leedahay in aad dooratid goob kale. Noorwey gudaheeda, dad badan ma doortaan in ay ku dhallaan ilmahooda guriga, balse waxaa suurtagal ah in aad sidaasi sameysid. Haddii tani ay tahay waxa aad doonaysid, waa in aad tani la diyaarisaa ummuliso kuugu imaanaysa guri dhallinta. Muujiyaha muuqa-hoose ee uurka (Ultrasoundka) Dhammaan haweenka uurka leh waxaa la siiyaa hal baaritaan muujiyaha muuqa hoose ee uurka (ultrasoundka) ah ku dhowaad toddobaadka 18aad ee xaammilnimada. Hawsha baaritaanka waxaa lagu sameeyaa isbitaalka aad ku dhalli doontid cunugaaga ama isbitaalka kuu dhow. Ilmaha la soo xaaqo/joojinta xaammilnimada Sida uu qabo sharciga Noorwejiyanka, dhammaan haweenka waxay xaq u leeyihiin in ay go aasadaan iska xaaqidda ilmo toddobaadka 12aad ee xaammilnimada. Tani waxaa loola jeedaa in adiga shakhsi ahaan aad go aansitid inta lagu guda jiro 12ka toddobaad ee ugu horreeya haddii aad rabtid in aad sii 5
6 wadatid xaammilnimadaada ama in aan joojisid xaammilnimadaada. Waxaad la kulmi kartaa takhtar ama ummuliso si aad u heshid xog ku saabsan hab-raacani iyo saameynta caafimaad ee uu leeyahay. Buug-yaraha lagu magacaabo Til deg som vurderer abort ( Loogu tala galay qofka tixgelinaya ilmo iska xaaqid) wuxuu bixinayaa xog badan waxaadna ka heli kartaa takhtarkaaga ama bukaan socod eegtada hooyonimo. Haddii aad doonaysid in aad sameysid ilmo iska xaaqid kadib toddobaanka labo iyo tobbonaad ee xaammilnimadaada, waa in aad codsi oggolaansho ah soo codsataa. Ummulisooyinka iyo takhaatiirta waxaa waajib ka saaran in ay kugu caawiyaan codsigaaga. Koox khabiiro ah ( guddi) ee jooga isbitaalka ugu dhow waxay go aaminyaan haddii aad ilmo iska xaaqid sameyn kartid iyo haddii kale. Waxaa lagugu soo wargelinayaa wixii ku saabsan faahfaahinta camaliga ee ilmo iska xaaqidda. Ilmo dhicis ah dhallid/ilmo loo xaaqo si lama-filaan ah Dhiig bixidda xilliga xaammilnimada ah waxaa laga yabaa in uu noqdo calaamad ah ilma dhicis dhallid oo si dhakhso ah u dhici doono. Wax aan caadi ahayn ma aha in tani ay dhacdo xilliga lagu guda jiro labo iyo tobbonka toddobaad ee ugu horreeya, gaar ahaan haddii tani ay tahay xaammilnimadaada ugu horreysa. Xaammilnimadaada xigta waxaa laga yaabaa in gebi ahaan ay tahay mid caadi ah. Waa in aad la xiriirtaa takhtarka, adeega caafimaadka deg-dega ah ama isbitaal haddii aad umaleysid in ay kugu dhici rabto ilmo dhicis. Maxaa dhacaya marka aad xaammilo noqotid? Falgalka shahwada labka iyo ukunta dheddiga Haddii ugxanta (ukunta) haweenayda ay ku qaraxdo unuga minada labka ee ninka ka timaado xilliga falka galmada, waxaan dhahnaa ugxanta waa la bacrimiyay. Ugxanta la bacrimiyay waxay isku dhejinaysaa ilma galeenka (minka). Halkani waxay si dhakhso ah isugu baddelaysaa waxa loo yaqaano uur-kujir, kaas oo ah ereyga loo yaqaano ilmaha ku jira minka, ka hor inta uusan dhallanin. Uur-kujirka wuxuu dhex jiifsanayaa dahaarka madheerta ee gudaha ilma galeenka ah. Xarigga xuddunta waxay ka tagtaa xuddunta uur-kujirka waxayna tagtaa man-dheerta. Man-dheerta waxaay ku dhegsan tahay ilmo galeenka. Uur-kujirka wuxuu ka helayaa wax walbo oo uu u baahan yahay si neef ogsijiin iyo nafaqo ahaan ah xarriga xuddunta, aad ayayna ugu dhawrsan tahay gudaha ilma-galeenka. Koritaanka uur-kujirka Marka uur-kujirka uu jirsaddo 20 toddobaad miisaankiisa waa ku dhowaad 250 garaam dhererkiisuna waa ku dhowaad 24 sm. Hadda waxaad dareemaysaa in cunugaaga uu ku dhaqdhaqaaqayo gudahaaga. Wuu ku laadayaa in badan ayuuna ku wareegayaa ilma galeenka maalin kasta. Kadib 40 toddobaad ilmaha aanan dhallanin culeyskiisa ku dhowaad waa 3500 garaam dhererkiisana waa ku dhowaad 50 sm. Ummulisada ama takhtarka wuxuu eegayaa koritaanka uur-kujirka asagoo ku cabbiraya calooshaada mitiriye baaritaan kasta. Wadnaha uur-kujirka si aad ah oo ka badan dadka qaangaarka ah ayay u garaacmayaan: In u dhaxeysa 110 iyo 160 garaacmid daqiiqadiiba waa caadi. Takhtarka ama ummulisada waxay ku dhageysanayaan calooshaada ayagoo isticmaalaya qalabka dhegaha takhtarka gashado marka uu baarayo bukaanka si uu u eego wadno garaaca uur-kujirka. 6
7 Ummulisada ama takhtarka waxay dareemayaan calooshaada si ay u go aamiyaan booska uur-kujirka. Waxaa muhiim ah in tani la ogaado ka hor dhalmada. Ilamaha badankood waxay qaataan boos ah in madaxa uu soo aado dhanka lafa-misiga iyo dariiqa dhalmada. In Xoogaa (ku dhowaad 4%) ah qaybtooda hoose ama lugahooda ayaa hoos soo aada. Tani waxaa loo yaqaanaa booska barida. Qaarkood waxay u yaalaan si gees-gees ah waxaana loo yaqaanaa gees-gees u yaalid (transverse lie). Haddii ilmahaaga uu u yaalo booska bari-bari ah, waa in raajito laga qaado lafa-misigaaga. Takhtarka markaas kadib wuxuu eegayaa haddii uu jiro boos loogu tala galay dhalmada caadiga ah. Haddii uu jiiro boos aan ku filnayn ama ilmaha uu gees-gees u yaalo (transverse lie), takhtarka wuxuu kuu soo jeedinayaan dhalmo qaybta qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada ayadoo tani ay tahay sida ugu badbaadsan adiga iyo cunugaaga. Uur-kujirka wuu koriyaa sidaas awgeed wax ayuu dareemayaa, wax ayuu arkayaa ama wax ayuu maqlayaa asagoo calooshaada uu kujiro. Wuxuu cabayaa biyo kadibna wuu soo daynayaa. Waqti qaado maalin walba oo aad fadhiisatid, waxaad saartaa gacamahaaga calooshaada kadibna dareen sida ilmahaaga uu u dhaqdhaqaaqayo. Waa in aad dareentid dhaqdhaqaaqa uur-kujirka iyo laadkiisa dhowr jeer maalin kasta. Haddii aad dareentid in uu yahay mid aad u daggan oo xasillan, waa in lagu baaraa. Waxaad wici kartaa ummulisada, takhtarka ama qaybta isbitaalke ee hooyonimada si ay u baaraan uur-kujirkaga haddii uusan dhaqaaqaynin saacado badan. Buugaag leh masawiro oo ah koritaanka uur-kujirka waxaa laga heli karaa maktabada dadweynaha ee deegaankaada. Taariikhda la filayo in ilmaha uu dhasho Xaammilnimada sida caadiga waxay soconaysaa 283 maalmood, ama 40 toddobaad iyo 3 maalmood ama sagaal bilood. Taariikhda la filayo waa taariikhda marka uur-kujirka uu jirsado ku dhowaad 40 toddobaad iyo 3 maalmood. Baaritaanka la isticmaalo muujiyaha muuqa-hoose ee uurka waa habka ugu saxan ee loo go aamin karo taariikhda la filayo in uu ilmaha dhasho. Dhalmada sida caadiga ah waxay dhacdaa labo toddobaad ka hor ama labo taddobaad kadib taariikhda la filayo. Kaliya lix ilmo boqolkiiba ayaa xaqiiqdii ku dhasha taariikhda la filayo. Maxaa ku dhacaya jirkaaga marka aad xaammilada tahay? Jirkaaga wuxuu marayaa is-baddelo badan inta lagu guda jiro xaammilnimada. Naasahaaga way waynaanayaan waxaana laga yaabaa ilaa xad in ay xanuunaan marka ay bilaabayaan. Calooshaada way koraysaa adna guud ahaan waxaad noqonyasaa qof qaab goobaaban leh. Xoogaa cayilnaan ah oo kugu soo kordha waa ay wanaagsan tahay, 12 ilaa iyo 14 kiilo waa caadi. Haddii aad aad u culus tahay ka hor inta aadan xaammilo noqonin, waa in aad waydiisatid caawimaad si aad u baddeshid cuntadaada. Ma wanaagsano in culeys aad u badan kugu kordho. Haddii aad tahay qof aan cayilnayn, waxaad sidoo kale u baahan tahay in aad baddeshid cuntadaada adigoo u baahanaya awood badan laf ahaantaada iyo ilmahaaga inta lagu guda jiro mudadaan Nafaqo Haddii aad leedahay dhaqamo wax cunid oo caafimaad qab leh, waa in aad sii wadatid cuntadaada caadiga ah. Uma baahnid in aad cuntid labo ama in aad cuntid cuntooyin gaar ah. Cunto caafimaad qab leh waxaa loola jeeda cunto kala gedisan oo leh khudaar iyo mirro. Si uu ilmaha u weynaado uuna u koro, waxaad u baahan tahay xoogaa fitamiino dheeri ah iyo macdano haddii oo aysan ahayn, balse ma aha tamar cunto oo dheeri ah. Waxaad kaliya u baahan tahay aashitada foolik iyo fitamiin D oo dheeri ah. Ummulisada ama takhtarka waxay eegayaan heerka unugyada dhiiggaaga cas waxayna kuu sheegayaan haddii aad u baahan tahay fitamiino dheeri ah ama kiniiniyo macdanta birta ah ee cuntada kujirta iyo haddii kale. Cuntooyinka kala duwan waxaa ku jira nafaqo kala duwan, sida boritiinka, kaarboheydareyt, caddiinta, fitimiina iyo macdan, sidaas awgeed waa in aad cuntid cunta kala duwan, cunto caafimaad 7
8 qab leh oo kalluun, hilib jiir ah oo aan baruur lahayn, rooti qamadi ka sameysan iyo waxyaabaha badarka laga sameeyo iyo khudaar iyo miro. Waxa ugu fiican ee la cabbo haddii uu oon ku haayo waa biyo, laakin waxaad sidoo kale si hubaal ah u cabbi kartaa hal ama labo koob oo caano subagga ku yar maalin kasta. Cabbitaanada aashitada ee sonkorta leh, dheecaanka miraha ( casiir lagu daray sonkor) iyo casiir ku jira tamar badan. Haddii aad cabtid wax badan oo ka mid ah kuwani, waxaa laga yaabaa in culeys badan uu kugu soo kordho. Cuntada ku jirta sonkor badan ama subag kuuma fiican adiga. Fadlan booqo bogga (Af Ingiriisi ama Af Noorwejiyan) wixii ku saabsan xogta la xiriirta nafaqada. Sigaar cabbid, aalkolo iyo maandooriyeyaasha Sigaar cabbida waxay waxyeelo gaarsiinaysaa uur-kujirkaaga sababtoo ah kiimikada nikotiinta ee dhiigga hooyada kujirta waxay u gudbaysaa uur-kujirka. Xaammilnimo aan lahayn tubaako waxay yareynaysaa halista ilmo dhicis, dhallimada aan waqtigeeda la gaarin iyo dhibaatooyin kale ee xaammilnimada ah. Kala hadal ummulisadaada ama takhtarkaaga wixii ku saabsan caawimaada joojinta sigaar cabbidda. Ka Wac khadka taleefoonka sigaar cabbid joojista Røyketelefonen ama booqo Aalkoloda waxaa sidoo kale loo gudbiyaa uur-kujirka, sidaas awgeeda ma aha in aad cabtid gebi ahaan wax aalkolo ah. Wax kasta oo haweenayda uurka leh cabbayso, waxay la qayb sanaysaa ilmaha, oo ay ka mid tahay aalkoloda. Haddii hooyada ay cabto aalkolo, sidoo kale ilmaha ayay gaaraysaa wuxuu sidoo kale ku qaadanayaa dhiigiisa caddad aalkolo oo la mid ah tan hooyada oo kale. Maskaxda ilmaha si gaar ah ayay baylah ugu tahay, sababtoo ah way sii koraysaa inta lagu guda jiro gebbi ahaan xaammilnimada. Aalkolada waxay carqaladaynaysaa koritaankan waxayna u keenaysaa cunuga dhibaatooyin xagga waxbarashada iyo fahanka ah ama in uu ku dhasho cillado. Tani gebi ahaanba waa la iska ilaalin karaa haddii hooyada aysan cabbin wax aalkolo ah inta ay xaammilada tahay. Daroogooyinka sida xashiishada, jaadka iyo waxyaabooyinka kale ee maandooriyeha ah ee aan la ogolayn waa in aan la qaadanin. Waxay keeni karaan dhibaatooyin xilliga xaammilnimada ama ilmo dhicis, iyo rafaadsananaan iyo cillado ku dhaca ilmaha (culleys yar, qaab-xumo, calaamado la-noqosha ah imw.). Daawaynta Haddii aad isticmaasho daawayn ama aad u malaysid in aad u baahan tahay daawayn marka aad xaammilada tahay, waxaad u baahan tahay in aad oggaatid in daawaynta ay waxyeelo ugaysanayso cunugaaga. Waydii ummulisada, takhtarka ama farmashiile haddii aad qaadan kartid daawayn marka aad xaammilo tahay. Wax-qabad jir ahaaneed Waa ay badbaadsan tahay in la firfircoonaado si jir ahaaneed oona laga qayb qaato ciyaaraha adigoo ah xaammilo. Haddii aad tahay qaab wanaagsan, waxay helaysaa awood iyo adkaysi badan. Xaammilnimada, dhalmada iyo muddada ummusha waxay saarayaan cadaadis dheeri ah jirkaaga sidaas awgeed waa fikrad wanaagsan in aad ahaatid qof jirkiisa u dhisan sida ugu macquulsan. Wax-qabadka jir ahaaneed waxyeello uma gaysanaayo uur-kujirka. Haddii aad tahay qof aan firfircooneen markaas ka hor, wax-qabad yar wuu ka fiican yahay wax-qabad la aan. U bilaaw si tartiib ah jir dhis samee ilaa iyo 30 daqiiqadood ugu yarraan maalin kasta. Waxaad sameyn kartaa dhammaan 30ka daqiiqadood hal mar, ama u qaybi ilaa iyo muddo saddex 10 daqiiqadood ah, tusaale ahaan. Galmo Waxaad sii wadi kartaa in aad u galmootid sidii aad u galmoon jirtay ka hor inta aadan xaammilo noqonin. Haweenka qaarkood waxay doonayaan galmo dheeri ah, qaarkoodna in yar. Tani waxaa sidoo kale laga doonayaa jaalkaaga. Waa in aad wixii ku saabsan dareenkaaga si wadajir ah ugu wada hadashaan waxaa laga yaabaa in ay kugu caawiso in aad u sii wadatid xiriirkaaga guurka hab labadiinaba aad kuwada qanacdaan. 8
9 Dhibaatooyinka qaarkood ee caadiga ah xilliga xaammilnimada Lallabo Haween badan waxaa ku dhaca wallac xilliga lagu guda jiro toddobaadyada ugu horreeya ee xaammilnimada. Inkastoo uu yahay mid dhibaato leh, hadana halis ma aha. Xanuunsanaanta sida caadiga ah waa laga gudbayaa toddobaadyo kadib. Cunida cunto yar iyo wax fududeysiga subaxdii waxaa laga yaabaa in ay ku caawiso. Haddii aad wax badan ma tagtid oo aadna awoodi waysid in aad wax cuntid dhowr maalmood, waa in aad la xiriirtid takhtarka ama ummulisada. Daawayn ayaa lagu siin karaa haddii lallabada iyo mataga aad u aragtid dhibaato aad u daran. Dhacsaal Waa caadi in aad si fudud u daashid marka aad xaammilo tahay. Tani waa wax adiga iyo dadka kuu dhow looga baahan yahay in ay tixgeliyaan. Waxaad u baahan tahay nasasho iyo hurdo badan oo aan sida caadiga ahayn. Daalka sida badan wuxuu daran yahay xilliga lagu guda jiro toddobaadyada ugu horreeya iyo kuwa ugu danbeeya ee xaammilnimada. Dhiig bixid Dhibco yar-yar oo dhiig ah ama dhiig bixid yar ilaa xad waa caadi xaammilnimada hore iyo galmada kadib, balse waa in aad mar walba usheegtaa ummulisadaada ama takhtarkaaga haddii ay dhacdo. Dhammaan dhiig bixida waa in la baaraa, xataa haddii xaaladaha badankood aysan dhib ahayn. Xaaladaha caafimaadka xilliga xaammilnimada Halkan waxaan kaliya ku sheegaynaa laba ka mid ah xanuunada ugu badan ee caadiga ah ee laga yaabo in ay dhacaan Sonkorowga uurka /sonkorowga mellitus Baaritaanada eegista xaammilnimada haddii aad ay kujirto kulukoos (sonkor) kaadidaada, iyo haddii kale, wax intee la eg oo kulukoos ah ayaa kujirta dhiigaaga. Haddii kulukoosta (sonkorta) dhiigaaga ay aad u sarreyso, waxaad qabtaa sonkorowga uurka. Xaalado badan, tani waxaa ay dhammaataa kadib marka cunuga uu dhasho. Laakin haweenka qaarkood, kulukoos (sonkor) badan ee dhiigga ku jirta waxay lamid tahay in uu ku dhacay sonkorowga mellitus. Kani waa xanuun halis ah oo daba-dheeraada. Hal nooc oo sonkorow ah (nooca 2 ee sonkorowga ) ayaa aad ugu badan haweenka da yarta ahe ee ka imaada Aasiya iyo Waqooyiga Afrika marka loo eego Haweenka Noorwejiyanka ah asalka ah. Haddii aad qabtid sonkorowga mellitus, waxaad u baahan tahay in ay uu baaritaan kugu sameeyo qof takhasus u leh sidaas awgeed waxaad helaysaa daawayn habboon xilliga xaammilnimada iyo marka aad dhallaysid, iyo sidaas awgeed waxaad helaysaa la socosho habboon kadib marka aad dhashid. Baaritaano gaar ah ayaa loo sameeyay haweenka halista ugu jira sonkorowga uurka. 9
10 Cadaadiska dhiigga oo sarreeya iyo Dhiig karka uurku keeno (preeclampsia) Waqti kasta ee aad la kullanto ummulisadaada ama takhtarkaaga waxay eegayaan cadaadiska dhiigaaga. Haddii uu aad u sarreeyo, takhtarka ama ummulisada waxay kaa qaadayaan sanbalo kaadidaada iyo dhiigaaga ah si ay u eegaan haddii aad qabtid xaalada halis ah ee loo yaqaano Dhiig karka uurku keeno (preeclampsia). Xaaladani waxay leedahay heerar badan. Xaaladaha badankood waxaa laga yaabaa in qallal uu ku qabto kadibna aad dhacdid adigoo suuxsan. Waxa sababa xaaladan lama garanayo. Calaamadaha lagu garto Dhiig karka uurku keeno (preeclampsia) Haddii aad qabti wax ka mid ah calaamadahan, waa in aad la xiriirtaa takhtarkaaga ama qaybta isbitaalka ee hooyanimada qaabilsan si toos ah adigoon daahin: Madax xanuun aad u daran Dhibaatooyin xagga aragga ah, sida aragga oo boodbooda Xanuun qaybta sarre ee calooshaada ah Matag badan Wajigaaga, gacamahaaga ama cagahaaga oo si kadis ah u barara Haweenayda xaammilada ah ee ku dhaca Dhiig karka uurku keeno (preeclampsia) waa in ay u booqato qof takhasus u leh baaritaan dheeri ah. Haddii aad qabtid Dhiig karka uurku keeno (preeclampsia), waxaa laga yaabaa in aad u baahatid in fasax xanuunsasho ah. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahatid isbitaal dhigid. Maxaad sameynaysaa haddii aad ka shakisid in ay jiraan wax qalad ah? Haddii aad dareentid xanuunsanaan, ama aamintid in wax ay ka qaldan yihiin adiga iyo cunugaagaba, waa in aad wacdid takhtarka ama ummulisada. Sidoo kale waxaad wici kartaa qaybta isbitaalka hooyonimada qaabilsan ama adeega caafimaadka deg-dega ah Fasalo ummuleed Haween badan oo xaammilo ah oo ku dhaqan Noorwey waxay ka qaybqaataan fasalo ummuleed, iyo sidoo kale aabayaasha la filayo. Waydii haddii ay jiraan fasallo ku baxa luuqadaada. Fasalka waxaa baraya ummulisooyin ama koox ka sameysan ummuliso,takhtar gacanta wax ku daaweeya ee aan daawo isticmaalin. Cinwaanada waxaa ka mid ah: Maxaa dhaca xilliga xaammilnimada? Sidee ayay noqonaysaa muddada dhalmada iyo dhalmada kadib? Maxaa yarreynaya xanuunka xilliga foosha? Waxaad sidoo kale baranaysaa wax ku saabsan naas nuujinta ilmahaaga. Fasalada qaarkood waxaa ka mid ah booqasho qaybta isbitaalka hooyonimada qaabilsan sidaas awgeed waxaad ogaanaysaa waxa la filayo marka lagaaro xiliga aad dhalaysid ilmahaaga. Wax la isaga baahan yahay ma jirto si looga soo qaybgalo fasalada, balse haween badan waxay jecel yihiin in ay xog helaan iyo in xaaladaha ay kala hadlaan ummulisada iyo takhasusiinta kale. Fasalada qaarkood waa lacag la aan, balse badankood waxay dad ka qaadaan lacag yar. 10
11 Qiirada Xilliga xaammilnimadooda haweenka badankood waxay dareemaan hubanti iyo farxad-gelin, balse sidoo kale waxay ka walwalaan wax ku saabsan dhalmada. Maan awoodayaa? Aniga iyo cunuga ma badbaadaynaa? Waxaa jira su aalo ilaa xad ah oo sidaasi la mid ah. Marka waqtiga dhalmada ay soo dhowaato, si kastaba ha ahaatee waxaad diyaar u noqonaysaa in aad dhashid. Waxaa laga yaabaa in aad sabar la aan badan dareentid. Haween badan waxay qabaan fikrado sida: Aan sii wadno dhalmada! Waxaan dareemaa culeys iyo daal. Waxaan doonayaa in cunugayga aan ku haysto gacamahayga baddelkii caloosha! Jirkaagu wuxuu u diyaar garoowayaa dadaal badan ee dhalmo. ku kalsoonow jirkaaga! Haweenka guud ahaan aduunyada waxay awoodaan in ay dhallaan. Adigana sidoo kale waad kari kartaa. Dhalmada waxay ka dhacdaa maalin kasta dhammaan geesaha aduunyada iyo dhammaan waqtiyada maalinta. Isku kalsoonow, waad awoodi kartaa! Walaaca iyo walaaca dhalmada Haweenka qaarkood waxay ka walaacaan dhalmada. Shucuurtan aad ayay awood u yeelan kartaa waxayna keeni kartaa in dhammaan dareenada hubantiga ah in la waayo. Nasiib wanaag waxaad heli kartaa caawimaad haddii dhibaatooyinkaaga ay noqdaan kuwo xad-dhaaf ah. Qaybaha isbitaalka hooyonimada qaabilsan badankood waxay bixiyaan xiisado daawayn ee loogu tala galay haweenka ka baqa in ay dhallaan. Seygaaga ayaa ku raaci kara ama waxaad la imaan kartaa qof kale oo aad u baahan tahay in uu kula joogo. Adiga laf ahaantaada ayaa wici kara, ama waxaa ballanta xiisadaha daawaynta kuu diyaarin kara ummulisada ama takhtarka. Ayadoon la tixgelinayn waxa sababay walaacaaga waxaad helaysaa caawimaad. Si wadajir ah ayaad takhtarka iyo ummulisada uwada ogaanaysiin sida dhalmada ay kuugu noqon lahayda dhacdo wanaagsan. Ma jeclaan lahayd in qof kuula jooga marka aad ilmaha dhallaysid? Waa fikrad wanaagsan in qof uu kuula socdo marka aad ilmaha dhalaysid. Adiga go aami qofka kuula joogayo. Noorwey waxaa caadi ka noqday in aabaha ilmaha uu soo xaadiro. Haddii aadan ku hadlaynin Af Noorwejiyan, waxaa xikmad badan in uu kuula joogo qof ku hadla. Qaybta isbitaalka hooyonimada qaarkood waxay oggol yihiin hal qof ka badan in uu ku raaco. Waqti ku qaado in aad tixgelisid qofka aad jeceshahay in uu kuula joogo. Ujeedadu waa in aad dareentid badbaadsanaan iyo kalsooni qof kasta oo ku soo raaco marka aad dhalleysid. Qof kasta oo ku soo raaco waa in uu ku caawin karo, aadna ku nafasi kartid kuna dhiirri-galin karo. 11
12 Qaybta 2 Ereyada dhalmada Rier Rie-pause Fostervann Vannavgang Fosterstilling Hodeleie Seteleie Tverrleie Vaginalundersøkelse Klyster Vannlating/urin Navlestreng Fosterlyd CTG Fødestilling Amming Råmelk Smerte Vondt Smertelindring Bedøvelse Epidural Induksjon/drypp Klippe Sy Sting Keisersnitt/ Sectio Anestesi Maroojinta, xanuunada foosha, xanuunada daran oo kadiska ah ee dhalmada Hakinta maroojinta Biyo, dheecaanka Hoorka madheerta (Amniotic) Biyaha soo jabay Booska uur-kujirka U yaalida ilmaha qaab joog-joog ah ama qab madax kor aad ah U yaalida ilama qaab bari-bari ah U yaalida ilmaha qaab gees-gees ah Baaritaanka unuga dhalmada Ineema Biyo/kaadi sii deyn Xarigga xuddunta Codka wadnaha ee uur-kujirka CTG (sawirqaadida la xiriira wadneha (cardiotograpy)) dhegaysashada wadeha uur-kujirka si elektaroonik ah Soo bandhigid, u yaalid, boos Naas nuujin, nuujin Caanaha ugu horreeya, dambarta Xanuun Xanuun, dhaawicid, xanuun badan Ka bogsashada xanuunka Suuxiye Suuxin dhalineed Foolin/tifqid Isu-goyn Qodbitaan Qodbid (tolid) Cunug ku qalid ama qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada Suuxin 12
13 Dhalmada Dhalmada aan waqtigeeda la gaarin Haddii lagu maroojiyo ama biyahaaga soo jabaan ka hor adigoon gaarin toddobaadka 37, waxaa loo yaqaanaa dhalmo aan waqtigeed la gaarin. Tani waxaa loola jeedaa in aad waqti hore dhalaysid. Markaas waa in aad ku dhashid isbitaal leh qaybta daryeelka ilmaha markaas dhashay. Ilmaha muddada dhalmada ka hor dhashay waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad xilliga lagu guda jiro muddada ugu horreysa ee noolashooda. Adiga iyo ilmahaagaba waxaad u baahanaysiin waqti iyo daryeel badan marka loo eego haddii uu cunugaaga ku dhallan lahaa ku dhowaad waqtiga la filayay. Dhalmada waqtigii la filayay ka dib dhacdo Waxaad gaartay waqtigii la filayay ee dhalmada waxna ma dhicin. Adiga iyo qof kasta ee kuu dhow waxaad noqoteen sabar la aan. Wax fudud u qaado waa caadi ilmo la dhalo wax-yar ka hor ama wax-yar kadib taariikhda la filayay. Haddii aadan dhallin labo toddobaad kudahooda kadib taariikhda la filayay, waxaa ugu yeernaa dhalmo waqtigii la filayay kadib dhacday. Cilmi baaris ayaa lagu sheegay in ilmo badan ay ka helaan nafaqo aad u yar man-dheerta haddii ka dib dhicida waqtigii la filayay ilmaha in uu dhasho uu dheeraado. Sidaas awgeed qaybta isbtiaalka ee hooyooyinka waxay bilaabayaan dhalin hab daawayn ahaan ah. Tani waxaa loo yaqaanaa dhalmo dedejin. Saamaynta daawanta waa in la bilaabo foosha. Kadibna dhalmada si caadi ah ayay u sii soconaysaa. Meesha lagu dhallo Waa ay badbaadsan tahay in ilmo lagu dhallo Noorwey. Waxaad taageero ka helaysaa dad khubaro ah. Dhammaan qaybaha isbitaalada ee hooyonimada waxay leeyihiin dhammaan qallabka laga ma maarmaanka ah. Haweenka ku dhaqan Noorwey badankood waxay ku dhallaan isbitaal. Haddii aad ku nooshahay meel meeshaas oo leh qol dhallin, meeshaas waad ku dhali kartaa. Haddii ay sidaasi tahay, waa in aad caafimaad qabtaa xaammilnimadaadana waa in ay si caadi ah u soosocday. Haddii aad doonaysid in aad ilmo ku dhashid gurigaaga, tani waa in aad kala hadashaa ummuliso doonaysa in ay fuliso dhalmo guri. Ilmo ku dhalid isbitaal ama qolka dhallinta waa lacag la aan. Yaa ku caawinayaa xilliga dhalmada? Ummulisada ayaa ku qaabilaysa marka aad u imaatid dhalmo waxayna mas uul ka tahay dhammaan dhalmada caadiga ah. Si fiican ayay u tababaran tahay waxayna awoodaa in ay ku caawiso xilliga dhalmada iyo muddada dhalmada kadib. Ummulisada waxay mas uul ka tahay in ay eegto in wax walbo ay sidii la rabay u socdaan. Haddii wax aan caadi ahayn ay dhacaan, ummulisada waxay wacaysaa takhtar. Takhaatiirta joogta qaybta isbitaalka ee hooyonimada waxay leeyihiin tababaro gaar ah ee takhasuska ilmo dhallinta iyo dhalinta ilmaha ah. Waxay kuu hayaan mas uuliyad haddii dhibaatooyin ay imaadaan. Kalkaalisooyinka carruurta qayta isbtiaalka ee hooyonimada iyo qaybta umuleedka iyo qaybta daryeelida ilmaha markaas dhashay waxaa loo soo tababaray in ay bixiyaan caawimaad xilliga dhalmada. Sidoo kale ayaga waxay u qalmaan in ay daryeelaan carruurta iyo in ay kugu caawiyaan naas nuujinta ilmahaaga. Arday sida badan way joogaan xilliga dhalmada. Asaga/ayada waxaa laga yaabaa in ay yihiin arday baranaya kalkaalisinimo, ummuliso ama takhtarnimo. Waxaa lagu barayaa ardayga marka aad imaatid qaybta isbitaalka ee hooyonimada. Ardayda waxay haystaan waqti badan waxayna sida badan awoodaan in ay ku siiyaan caawimaad badan xilliga dhalmada. Haween kaliya miyaa joogaa qaybta dhalmada ee isbitaalka ee hooyonimada? Ummulisooyinka badankood iyo kalkaalisooyinka carruurta waa haween. Noorwey takhaatiirada rag iyo haweenba waa ay leeyihiin. Sidaas awgeed ma aha in aad u qaadatid in haween kaliya ay joogayaan. 13
14 Habka dhismaha ee dhalmada Bilaawga dhalmada «Ugu-dambeyntii! Hadda ayay bilaabmaysaa! Waxaa laga yaabaa in ay ku farax-gelisid aadna u riyaaqdid, balse waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad xoogaa cabsatid. Waxaad dhabarkaaga ka dareemaysaa xanuunada caadada oo kale. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan xoogaa dhiig bixid ah, iyo in unugaaga dhalmada ay ka timado duuf iyo dhiigg isku qasan. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in ay jiraan xoogaa dheecan oo ka imaanaya unuga dhalmada. Dhalmada waa ay bilaabanaysaa. Hadda maxaa dhacaaya? Maroojin Dhalmada badanaa waxaa ay ku bilaabataa maroojin. Tani waa adkaanshaha muruqyada ilma galeenka. Waxaad dareemaysaa in calooshaada ay adkaanayso kadibna ay xoog yeelanayso. Haween badan waxaa ay maraan xanuun dhabarka ah marka maroojintan ay timaado. Sida bilowga ah waxay soconayaan 20 il biriqsi ilaa iyo hal daqiiqo. Waa in ay u imaadan si joogto ah, laga yaabee in 10 daqiiqadood oo joogsi ah u dhaxeyso. Kama-danbaystii xoog ayay u waynaanayaan waxayna soconayaan laga yaabee hal daqiiqo. Joogisyaasa waa ay yaryihiin, laga yaabee kaliya labo daqiiqadood. Maroojisyadan waxay furayaan afka minka (afka ilma galeenka) waxayna ku caawinayaan uur-kujirkaaga in uu aado dhanka hoose ee dariiqa dhalmada ee dhanka sagxada lafa-misiga. Marka ay biyahaaga jabsadaan Mararka qaarkood dhalmada waxay bilaabmantaa marka xuubka uur-kujirka uu qarxo sidaas awgeed dheecaanka amniotic, ee ah biyaha ku harreersan uur-kujirka, ay daataan. Marka ay tani dhacdo waxaan dhahnaa in biyahaaga ay soo jabsadeen. Caddadka biyaha khasab ma aha in ay bataan. Dheecaanka madheerta (amniotic) sida caadiga ah midab malaha, balse waxaa laga yabaa in uu sidoo kale u ekaado midab caddaan ah ama midab cascasuur (cascasaan) ah. Haddii dheecaanka uu yahay jaale ama cagaar, waa in aad aadid goobta aad ilmaha ku dhali rabtid si baaritaan dheeri ah lagugu sameeyo. Kadib marka biyahaaga ay jabsadaan, foosha ayaa bilaabanayso. Maroojisyada mararka qaarkood si dhakhso ah ayay ku bilaabmaan, ama waxaa laga yaabaa in ay tartiib tartiib u badato dhowr maalmood. Haweenka qaarkood, biyaha waxay soo jabsadan kadib marka maroojinta ay bilaabanto. Goormeed wacaysaa qaybta isbitaalka ee hooyonimada? A. Marka aad aamintid in aad dhallaysid aadna qabtid maroojisyo aad ah. B. Haddii uu jiro wax dhiig bixid ah C. Haddii aad xanuun ka dareemaysid calooshaada ee aan ahayn maroojisyo D. Haddii biyahaaga soo jabsadaan (dheecaanka madheerta (amniotic) ay soo daataan) E. Haddii ilmaha uu aad u degan yaha uusana dhaqaaqaynin Waxaad wici kartaa aadna la hadli kartaa ummuliso joogta qaybta isbitaalka ee hooyonimada. Waxay ku siinaysa talo haddii wax shaki kaaga jira. Maxaad la imaanaysaa qaybta isbitaalka ee hooyooyinka? Xusuusnow in aad keentid dhammaan waraaqihii baaritaanada xaammilnimadaada. Waydii ummulisada iyo takhtarka waxa aad ugu baahanaysid qayta isbitaalka ee hooyonimada. Haweenka sida caadiga ah waxay la imaadaan: qalabka musqusha, faashado nadaafadeed, kabo khafiif ah oo gudaha lagu joogo, surweelo halaf-halaf ah, dhar qaybta sarre ee si fufud loogu furi karo naas nuujinta iyo dharka qubeyska. Waqti hore waydiii haddii cunugaaga uu isticmaalo karo dharka qaybta istibaalka hooyonimada. 14
15 Maxaa dhacaaya marka aad imaatid qaybta hooyonimada ee isbtiaalka? Ummulisada ayaa ku qaabilaysa waxayna ku waydiinaysaa sida aad dareemaysid. Baaritaanada caadiga ah ay fulin doonto waxay noqonayaan: In ay eegto caddaadiska dhiigaaga In ay qaado sanbal kaadi ah In ay dhagaysato wadnaha uur-kujirka Mararka qaarkood, haddii loo baahdo, waxay qaadaysaa CTG, kaas oo ah makiinad ilaalinaysa codka wadnaha uur-kujirka iyo maroojisyadaada. Labo suun ayaa lagu dhejinayaa banaanka calooshaada jaantusyada iyo garaafyada ee ilaalinta waxaa lagu soo sawiraa xariijimo waraaq ah. in ay baaritaan ku sameyso goobta gumaarka. Haddii aad qabtid maroojisyo, ummulisada waxay eegaysaa haddii afka ilma-galeenka (dhuunta minka) ay ballaarantay. Waxay gashanaysaa gacangashiga qalliinka kadibna waxay eegaysaa unugaaga dhalmad si ay u dareento afka ilma-galeenkaaga. Waxay cabbiraysaa ballaarashada (daloolka) afka ilma-galeenka ayadoo isticmaalaysa faraheeda. Cabbirka inta uu la egayahay wuxuu caddeynayaa inta ay dhalmada kuu jirto. Haddii daloolka uu la egyaha saddex sentimitir aadna leedahay maroojin, waxaad joobtaa bilowga dhalmada. Marka daloolkaaga uu la egayah 10 sentimitir, waa waqtiga lagaa rabo in aad bilowdid riixitaanka ilmaha. Baaritaanadan kadib waxaad ka wada hadlaysiin haddii aad sii joogaysid qaybta isbitaalka ee hooyonimada ama aad guriga aadaysid si aad u sugtid. Ummulisada ayaa mas uul kaa ah isla marka aad soo gashid qaybta isbitaalka ee hooyonimada. Kulama joogi karto adiga waqti kasta balse waxaad waci kartaa ayada waqti kasta. Waydii ayada in ay imaato haddii aad la walaacsan tahay, xanuun ama baahi caawimaad iyo talo. Inta lagu guda jiro marxalada ugu dambeysa ee dhalmada adiga ayay si joogto ah kuula joogaysaa. Sida badan waxaa la socda kalkaalisada carruurta ama marmarka qaarkoodna arday. Muddo intee la eg ayay dhalmada qaadanaysaa? Nasiib xumo kuuma sheegi karno muddada ay dhalmada qaadanayso. Haweenay kasta waxay leedahay qaafiyad dhalmo ayada u gooni ah waqtiga dhalmada ee ay qaadanayso wuu kala duwan yahay. Haddii aad hore u dhashay, dhalmadaada xigta waxay sida caadiga ah qaadanaysaa waqti ka yar tii hore. Maroojinyada halis ma aha Xusuusnow is maroojinyada ay yihiin shaqo muruq, shaqo jir oo adag. Muruqyada ilma galeenka way isku soo ururayaan kadibna way debciyaan, way isku soo ururayaan kadibna way debciyaan, saacado ilaa iyo dhammaadka. Shaqada aadka u adag waa mid daal leh waxaana laga yaabaa in ay waqti badan qaadato. Balse xusuuso, maroojinyada in aysan waxyeelo lahay ama ay halis ahayn. Qiiro xoog leh dhalmada waa mid farxad-gelin leh, hawl badan u baahan daalna leh. Awoodo xoog badan ayaa shaqeeya tani waxay soo kicinaysaa dareemo badan. Waad oynaysaa waadna qoslaysaa, waad halgamaysaa kadibna waad nasanaysaa. Waxaa laga yaabaa in aad matagtid, ama musqusha aad u aadid si isdabajoog ah. Haween badan ayaa ka baqa in ay lumiyaan is-xakamayntooda. Marka aad ilma dhalaysid waa in aad raacdaa dareenkaada shaqsi hana isku dayin I aad is-xakamaysid. Ku kalsoonow jirkaaga. Boosaska xilliga foosha TAAGANAAN, NUS FADHI Adiga ayay ku jirtaa haddii aad doonaysid in aad taaganatid, fadhiisatid ama aad seexatid. Ummulisada sida badan waxay ku siinaysaa talo fiican oo ku saabsan sida waxyaabaha laguugu fududayn lahaa. Sida badan baddel booskaaga. Ahaw qof firfircoon. 15
16 Heerarka kala duwan ee dhalmada Heerka bilowga ah waa marxalada qarsoon. Inta lagu guda jiro marxaladan waxaad joogtaa guriga, ma aha isbitaalka. Marxaladan waxaa laga yaabaa in ay socoto saacado ama maalmo. Maroojisyadaada waa mid aan caadi ahayn ku dhowaad 15 ilaa iyo 20 daqiiqadood ayaa laga yaabaa in laga soo wareegto inta u dhaxeysa maroojis kasta. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in la waayo saacado. Maroojisyada marka la joogo marxaladaan dhibaato aad ah ma laha. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan xoogaa dhiig ama dhuuf ah oo ka imaada unuga dhalmada. Ahaw mid firfircoon, lu lugay. Seexo kadibna naso marka maroojinta ay qaadato joojis dheer. Waa in aad dareentaa dhaqaaqa cunuga. wax cun waxna cab si aad u sii la haatid tamartaada. Heerka labaad ah waa marxalada firfircoon. Maroojisyada hadda waxay u imaanayaan si badanaa soo noqnoqda, waana waqtiga caadiga ah loola xiriiro isbitaalka. Waxaa laga yaaba in ay u dhaxeyso labo ilaa iyo shan daqiiqadood maroojisyada. Maroojis kastana wuxuu soconayaa ku dhowaad hal daqiiqo. Afka ilma-galeenka wuu ballaaranayaa. Uur-kujirka wuxuu hoos ugu soconayaa lafa-misiga. Tani waa shaqo jir ahaaneed oo adag. Wax yar cun wax yarna cab. Tani waxay ku siinaysaa awood waxayna sare u qaadeysaa niyadaada ee marxaladan. Ahaw qof firfircoon, ku dhax lugay qolka, si joogta ah u baddel booskaaga. Maroojisyada waxaa laga yaabaa in ay aad u xanuun badadyihiin marka aad jiiftid. Marxalada hoos u soo riixida. Waxaad dareemaysaa cunuga oo isku soo riixaya afka ilma-galeenka iyo malawadkaaga (marinka dambe). Ummulisada ayaa ku baaraysa waxayna kuu sheegaysaa marka wax kasta ay diyaar yihiin si cunuga u soo baxo. Hadda waxaad cunugaaga ku caawin kartaa adigoo si firfircoon u soo riixaya xilliga maroojisyada. Marxaladan waxay soconaysaa ku dhowaad hal saac. Ummulisada waxay kugu caawinaysaa in aad heshid boos fiican sidaas awgeed waxaad u isticmaali kartaa jirkaaga si saamayn leh. Waa in aad u soo riixdid si tartiib ah si aad isaga ilaalisid dhaawac. Madaxa cunuga iyo garbahiisa waa qaybta ugu wayn waxayna qaadanaysaa waqtiga ugu badan. Inta kale ee jirka si fudud ayuu u soo baxayaa. Heerka saddexaad waa marxalada marka ay man-dheerta banaanka soo baxdo. Kadib marka cunuga uu dhasho man-dheerta waa in ay banaanka soo baxdo. Markaas kadib waxaad markale dareemaysaa maroojisyo. Ilma-galeenka wuu isku ururayaa si uu u soo riixo man-dheerta. Waxaa la dareemayaa in ay wayntahay,balse way jilicsan tahay, banaan u soo bixideedana sida caadiga ah waa ay fududahay. Cunugaaga waa uu dhashay! Cunuga wuu oynayaa si uu u furo sanbabadiisa wuxuuna bilaabayaa in uu iskiisa u neefsado. Isla marka uu cunuga dhasho ummulisada way baaraysaa si ay u eegto in wax kasta ay wanaagsan yihiin. Kadib cunuga waxa la soo galinayaa gacamahaaga. Way u wanaagsan tahay cunuga in uu kuu soo dhowaado lana seexiyo meel u dhow naasahaaga kadib dhalmada. Cunuga wuxuu soo maray dhalmo dheer wuxuuna u baahan yahay nasasho iyo diirranaan. Hadda waxaa isku dayi kartaa in aad naas nuujisid cunugaaga. Ilmo badan naas ayay nuugaan kadib isla marka ay dhashaaan. Eeg cunugaaga. Cunuga dib ayuu kuu soo eegayaa dhaygaagid aad ah. Ummulisada iyo kalkaalisa carruurta way ku caawinayaan sidaas awgeed cunugaag wuu diirranaanayaa wuuna badbaadsanaanayaa wuxuu u neefsanayaa si firaaqo leh. Saacadaha ugu horreeya kadib dhalmada Adiga iyo cunuga waxaad joogaysiin qaybta isbitaalka ee hooyonimada labada saacadood ee ugu horreeyada kadib dhalmada. Kadibna waxaa laguu gudbinayaa qaybta isbitaalka ee ummusha. Ummulisada ayaa daryeelaysa adiga iyo cunugaagaba. Xoogaa dhiig ah oo ka imaada unuga dhalmada kadid dhalmada waa wax caadi ah. Adiga iyo cunugaaga waa in aad diirranaatiin oodna qandac ahaantiin. 16
17 Waa caadi in aad soo jeedid aadna dhaq-dhaqaaq badan yeelatiin xataa haddii dhalmada ay tahay mid daal-leh. Hadda waad nasan kartaa waxaadna baran kartaa cunugaaga. Waxaa lagu siinayaa wax aad cuntid iyo wax aad cabtid kadibna waxaad qaadan kartaa qabays haddii aad doontid. Haweenka qaarkood waxay doonayaan in qoyska ugu soo dhow ay soo booqdan. Waxa dhici kara xilliga dhalmada Jeexdin, Isu-goyn iyo qodbida Marka cunuga uu soo baxayo waxaa laga yaabaa in ay jirto jeexdin afka iyo gudaha unuga dhalmada. Mararka qaarkood takhtarka ama ummulisada waxay goyn qalliin ah ku sameynayaan salka unuga dhalmada si cunuga dhakhso ugu soo baxo. Jeexdinta waxay u baahanaysaa qodbid (tolmo) si deg-deg ah kadib dhalmada. Waxaa lagu siinayaa daawo ku suuxinaysa. Takhaatiirta iyo ummulisooyinka waxay u qalmaan in ay tollaan jeexdinyada. Haddii lagu guday/gudniin fircooni lagugu guday Haddii lagu guday aana waligaa hore laguu furin, tani waxaa la sameeyaa xilliga dhalmada kahor inta aan cunuga banaanka soo bixin. Mas uuliyiinta caafimaadka ee Noorweejiyanka ah waxay meel dhigeen shuruuc ah sida tani loo sameynayo. Dhammaan ummulisooyinka iyo takhaatiirta ka shaqaysa qaybta isbitaalka ee hooyonimada ee Noorwey waxay garanayaan sharciyadan. Waxaa lagu siinayaa daawo ku suuxisa. Ayadoo la higsanayo sharciyada Noorwejiyanka daloolka waxaa laga yaabaa in markale aan la tolin si uusan u noqonin mid ciriiri ah hadda kadib. Waxaa laga yabaa in la dareemo in wax cajiib ah uu noqdo dhalmada kadib. Waxaa laga yabaa in aad dareentid furnaan xubinta unuga dhalmadana ay noqoto mid xanuunaysa. Nadaafad fiican waa muhiim, sidaas awgeed si wanaagsan biyo u raaci saabuun la aan marka aad musqusha aadid. Sida xaalada dhammaan haweenka kale, waa in aad jimicsi ka sameysaa muruqyada ku yaala hareeraha salka unuga dhalmada kadib dhalmada. Ka bogsashada xanuunka Dhalmada caadiga ah ma aha sida adigoo lagu qallaayo oo kale. Waxaa laga yabaa in aad si fudud u dhashid haddii Aad tahay qof firfircoon oo lugeeya Laguu daliigo Aad qaadatid qabays Aad fadhiisatid baafka qubeyska ama barkad qubeys oo biyo ka buuxo Aad ka heshid taageero iyo caawimaad qof aad ku kalsoon tahay Marka aad is dejisid fooshaada si xanuun badni yar ayay noqonaysaa. Ummulisada iyo kuwo kale ee kula jira waxay awoodaan in ay ku caawiyaan. Qof kasta oo ilma dhallaaya wuxuu u baahan yahay dhiirri-gelin iyo taageero. 17
18 Xanuun baabi yeyaasha kale Kiniiniyo. Sida caadiga ah, kiniiniyaasha xanuunka baabi iye ee farmashiyeha sida caadiga loogu soo iib sado u malaha saameyn weyn xanuunada dhalmada. Cunugaaga waxaa saameeya daawayn kasta ee aad qaadatid, sidaas awgeed kaliya daawooyinka qaarkood ayaa badbaadsan in la isticmaalo. Suuxiyeyaasha foolinta waxay ku siinayaan xanuun baabi n saamayn leh xilliga foosha. Suuxiyeyaasha foosha waxaa maamula takhtar ku takhsusay suuxinta. Waxaad noqonaysaa qof miyir qaba balse waxaad dareemaysaa xanuun yar ama xanuun la aan marka aad qabtid maroojinta. Daawaynta Irbidaha la isku muddo (Acupuncture) waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad kaga bogsatid xanuunada dhalmada. Ummulisooyin badan way u qalmaan In ay ku siiyaan daawaynta irbadaha la isku muddo ee loo yaqaano (acupuncture) Qalabka wax lagu qabto, qalabka wax dhuuqa Ummulisada waxay u soo yeeraysaa takhtar haddii ay dhibaato timado xilliga dhalmada. Haddii ay tahay in cunuga uu dhakhso u soo baxo, ama aad awoodi waysi in aad si ku filan u soo riixdid, takhtarka ayaa ku caawin kara. Takhtarka wuxuu isticmaalayaa qalabyada sida qalabka wax lagu qabto ama qalabka jirka dhuuqa si cunuga ugu caawiyo in uu banaanka soo baxo. Tani sida caadiga ah adiga iyo cunugaba dhaawac uma gaysanayso. Qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada Qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada waxaa kaliya la sameeyaa marka ay daruuri u tahay caafimaadkaaga iyo kan cunugaaga. Takhtarka wuxuu go aaminayaa haddii qalliinka ilmaha caloosha hooyada laga soo saaro loo baahan yahay, midkood ka hor inta dhalmada aysan bilaabain ama kadib marka ay bilaabato. Qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada waa hab-raac qalliin oo ah in lagu fuliyo masraxa qalliinka, ma aha qaybta isbitaalka ee hooyonimada. Waxaad saacado joogaysaa qayb gaar ah ka hor inta aan lagu gaynin qaybta isbitaalka ee dhalmada kadib (ummusha). Haddii qalliinka ilmaha caloosha hooyada lagu qallo la qorsheeyay xilliga xaammilnimadaada, waxaa laga yaabaa in aad qaadatid suuxiyeyaasha foosha. Markaas kadib waad soo jeedaysaa balse wax xanuun ah ma dareemaysid. Haddii qalliinka ilmaha lagu qallo caloosha hooyada la sameynayo kadib marka dhalmada ay bilaabato, waxaa sida caadiga ah lagu siinayaa suuxiyeyaasha foosha ama laf dhabarka. Haddii uu jiro deg-degsiimo ah in cunuga banaanka loo soo saaro, guud ahaan suuxin ayaa loo baahanayaa. Waxaad u baahanaysaa in aad miyir beeshid xilliga hab-raaca. Xilliga lagu guda jiro labo ama saddexda maalmood ee kadib qalliinka waxaad u baahanaysaa wax aad ku baabi isid xanuunka. Waa muhiin in aad dhaqdhaqaaqdid iyo in aad war wareegtid si aad ugu hortagtid qallal xinjireed (thrombosis). Waxaad si caadi ah u naas nuujin kartaa cunugaaga. Waxaad joogi kartaa qaybta isbitaalka ee hooyonimada afar ilaa iyo shan maalmood kadib qalliinka dhalmada ee ilmaha caloosha hooyada laga soo saaro. Maxaa dhaca haddii uur-kujirka uu dhinto ka hor dhalmada? Noorwey way ku yar tahay in uur-kujirka uu dhinta waqtiyada dambe ee xaammilnimada. Haddii ay wax qaldan yihiin, waxaad oggaanaysaa in ilmaha uu aad u xassilan yahay ama uusan gebi ahaanba dhaqaaqaynin. Wac takhtarka, ummulisada ama qaybta isbitaalka ee hooyonimada haddii aad dareentid in ay wax qaldan yihiin. Ha sugin in ka badan 24 saacadood. Takhtarka ama ummulisada markaas kadib adiga ayay ku baarayaan ayagoo isticmaalaya muujiyaha muuqa-hoose ee uurka iyo farsamooyin kale si ay u go aamiyaan haddii cunugaaga uu nool yahay. Markasta suurtagal ma aha in la ogaado sababta uu cunuga u dhintay. Si kastaba ha ahaatee dhalmada waa in ay ahaataa dhalmada caadiga ah ee laga dhallo unuga dhalmada. Haween badan waxay u arkaan si dhibaato aad ah leh in la dhallo xaalad noocaas oo kale ah waxayna doonayaan in cunuga loogu dhalliyo qalliinka ilmaha caloosha hooyada 18
19 lagu soo qallo. Si kastaba ha ahaatee Qalliinka ilmaha laga soo saaro caloosha hooyada waa mid aad halis kuugu ah sababtoo ah waa hab-raac qalliin. Dhalmada joogtada ah ayaa ugu wanaagsan una badbaadsan jirkaaga. Waxaa lagu siinayaa daawayn ka hortaga xanuunadaada. Kadib dhalmada waxaad joogi kartaa qaybta isbitaalka ee hooyonimada waxaadna helaysaa caawimaada baahidaada. Haddii cunuga la baaro kadib dhalmada, mararka qaarkood waxaa suurtagal ah in la go aamiyo sababta uu u dhintay. Xaammilnimada iyo dhalmada xigta waxaa guud ahaan laga yaabaa in ay caadi u noqoto adiga iyo cunugaagaba. Waxaa lagu siinayaa baaritaano xaammilnimo dheeri ah. Qaybta 3 Ereyada muddada ummusha Barsel Barselbesøk Hjemmebesøk Brystmelk Amming Råmelk Brystknopper Selvregulering Barnelegevisitt Gulsott Bleie Bind Blødninger Renselse Sårbarhet Postnatal depresjon / fødselsdepresjon Sting Etterkontroll Samleie Prevensjon Muddo ummuleed Booqoshooyinka dhalmada kadib Booqashada guri Caanaha naaska Naas nuujinta, nuujinta Caanaha ugu horreeya, dambarta ibta naasaha Xeerka shakhsi Boorashada takhtar carruureed Cudurka beerka ku dhaca (Cagaarshow) Xafaayad, harqabka carruurta dabada loogu xiro Faashad nadaafadeed Dhiig bixid Nadiifin Baylah ah (aan ilaalsanayn) Niyad-jabka xilliga ummusha Qodbid (tollin) Baarista caafimaad ee xilliga ummusha Fal galmood Ka hor-tagyada uur qaadidda 19